Complications of starting sex in young age - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” ခတျေဆိုတာလဲ တယျခကျသကိုး ” … နညျးပညာတှေ အသိပညာတှေ တိုးတကျလာတာက တဖကျ…ဒီလို နညျးပညာတှရေဲ့နောကျကှယျမှာလဲ ကောငျးကြိုးရော ဆိုးကြိုးရော ဒှနျတှဲနတောက တဖကျ… လူငယျတှဆေိုတာ အတုမွငျ အတတျသငျကွတာ.. သဘာဝ…ဒါကွောငျ့ တခါတလမှော မဖွဈသငျ့မဖွဈထိုကျတာတှကေို တားမွဈဖို့ရာက လူကွီးတှရေဲ့တာဝနျပါ…
– ပွောခငျြတာက ခုခတျေလူငယျ ဆယျ့သုံးဆယျ့လေးအရှယျ… မွီးကောငျပေါကျလေးတှဖေို့ သဈရှကျလှုပျရငျတောငျ ရငျခုနျတတျစအရှယျ… ပွောခဲ့သလို နညျးပညာတှကေ တိုးတကျနတေော့… ခုခတျေ online ပျေါ facebook ၊ viber ၊ beetalk ဒီလို social media တှအေပွငျ .. အတုယူမှာကာ အရကျ ၊ မှုးယဈဆေးတှသေုံးပွီး ရညျးစားသူငယျထားကွ၊ အပွငျမှာတှေ့.. အကဲစမျးကွ…လှနျကွူးမိကွတဲ့အခါ… ပွသနာတှေ သောငျးခွောကျထောငျ ကွုံရတတျကွပါတယျ…ဒါကတော့ ငယျရှယျစဉျမှာ လိငျမှုကိစ်စကို ပွုမိကွခွငျးရယျပါ….
– ခြှငျးခကျြအနဖွေငျ့ တခြို့သော မြိုးနှယျစုတှရေဲ့ ဓလေ့ ထုံးထမျးတှကွေောငျ့ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အိမျထောငျပွုလိုကျရတာမြိုးတှလေညျး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ.. ဒီအခါမှာ အိမျထောငျမှုဘဝကိုသခြော မသိသေးခွငျး၊ ရငျ့ကကျြမှု နညျးပါးခွငျး၊ ကိုယျဝနျစောလှယျရခွငျး စတာတှေ ကွုံရတဲ့အခါ အိမျထောငျဖကျအခငျြးခငျြး စိတျမရှညျ၊ ဒေါသထှကျလှယျခွငျး၊ နားလညျမှုလှဲခွငျး၊ အိမျထောငျရေးမသာယာခွငျးတှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ
– ဒီလို ရှုထောငျ့တှေ မြိုးစုံထဲကမှ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ရညျးစားထားပွီး နောကျပိုငျးမှာ အပြျောလှနျပွီး မှားတတျကွတာကို.. ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့လေးကနေ ပွောပွခငျြပါတယျ…
– ငယျရှယျသေးတဲ့အခြိနျမှာ sex ကိစ်စကို ကွုံကွတဲ့အခါ…
– လိငျမှုကိစ်စနဲ့ ပတျသတျလို့ ကာကှယျနညျးတှကေို သခြောလလေ့ာ မသိရှိခွငျးကွောငျ့ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျခွငျး၊ လိငျမှ တဆငျ့ ရောဂါမြား ပိုမိုကူးစကျနိုငျခွငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ
– ငယျရှယျသေး၍ ကိုယျဝနျဆောငျရနျ မသငျ့တျောဟု ဆိုကာ ကိုယျဝနျ ဖကျြခရြာတှငျ သှေးထှကျလှနျခွငျး၊ ရောဂါပိုးဝငျခွငျးကွောငျ့မိခငျအသကျပါ ဆုံးရှုံးရနိုငျခွငျး
– ကလေးမှေးဖှားရာတှငျ လမစပေဲ့မှေးခွငျး၊ ပေါငျမပွညျ့ခွငျး
– ကိုယျဝနျဆောငျရာတှငျ သှေးနှငျ့သံဓာတျအားနညျးသော ရောဂါဖွဈနိုငျခွငျး
– ကိုယျဝနျပကျြကပြွီးနောကျပိုငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွသနာမြား ကွုံတှရေခွငျး၊ စိတျဓာတျကခြွငျး၊ စိတျဂဏာမငွိမျဖွဈခွငျး
– ဒါပွငျ အသကျငယျလှနျးကွီးလှနျးတဲ့သူတှဟော ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါမှာ ပုံမှနျ အရှယျရောကျပွီး အမြိုးသမီးထကျ အန်တရာယျ ပိုတှရေ့တတျပါတယျ… နောကျပိုငျးမှာလဲ မီးယပျနဲ့ဆိုငျသော ရောဂါမြားကို ပိုမိုခံစားရနိုငျပါတယျ…
– မိမိဟာ ကိုယျဝနျလှယျနရေခွငျး(သို့) ပကျြကထြားခွငျးကွောငျ့ ကြောငျးကိစ်စ၊ အလုပျကိစ်စမြား နားနရေခွငျး
– မိမိကိုယျတိုငျက ငယျရှယျသေးသော မိဘ(teenage parents ) ဖွဈရာ မိမိသားသမီးကို ကောငျးမှနျစှာ ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျမှု မရှိခွငျးဒီလိုမြား မဖွဈရလအေောငျ လောကကွီး၏ အကွောငျးကို သခြောစှာ မသိသေးခငျ လမျးမှား မရောကျစရေနျ၊ အသိပညာမြား တိုးပှားစရေနျ လူကွီးမိဘမြားက သှနျသငျဆုံးမရနျ လိုအပျသကဲ့သို့ လူငျါမြားကိုယျတိုငျကလညျး ထိုကျလြောကျသော ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး အသိမြား ရှိဖို့ လိုအပျလှပါတယျ….
ဆငျခွငျတုံတရားကငျးသော လူငယျလူရှယျမြား မဖွဈကွဖို့ တိုကျတှနျးမတ်ေတာပွုလကျြ
" ​ခေတ်​ဆိုတာလဲ တယ်​ခက်​သကိုး " ... နည်းပညာ​တွေ အသိပညာ​တွေ တိုးတက်​လာတာက တဖက်​...ဒီလို နည်းပညာ​တွေရဲ့​နောက်​ကွယ်​မှာလဲ ​ကောင်းကျိုး​ရော ဆိုးကျိုး​ရော ဒွန်​တွဲ​နေတာက တဖက်​... လူငယ်​​တွေဆိုတာ အတုမြင်​ အတတ်​သင်ကြတာ.. သဘာဝ...ဒါ​ကြောင့်​ တခါတ​လေမှာ မဖြစ်​သင့်​မဖြစ်​ထိုက်​တာ​တွေကို တားမြစ်​ဖို့ရာက လူကြီး​တွေရဲ့တာဝန်​ပါ... ​
- ပြောချင်​တာက ခု​ခေတ်​လူငယ်​ ဆယ့်​သုံးဆယ့်​​လေးအရွယ်​... မြီး​ကောင်​​ပေါက်​​လေး​တွေဖို့ ​သစ်​ရွက်​လှုပ်​ရင်​​တောင်​ ရင်​ခုန်​တတ်​စအရွယ်​... ​ပြောခဲ့သလို နည်းပညာတွေက တိုးတက်​​နေ​တော့... ခု​ခေတ်​ online ​ပေါ် facebook ၊ viber ၊ beetalk ဒီလို social media ​တွေအပြင်​ .. အတုယူမှာကာ အရက်​ ​၊ မှုးယစ်​​ဆေး​တွေသုံးပြီး ရည်းစားသူငယ်​ထားကြ၊ အပြင်​မှာ​တွေ့.. အကဲစမ်းကြ...လွန်​ကြူးမိကြတဲ့အခါ... ပြသနာ​တွေ​ ​သောင်း​ခြောက်​​ထောင်​ ကြုံရတတ်​ကြပါတယ်​...ဒါက​တော့ ငယ်​ရွယ်​စဉ်​မှာ လိင်​မှုကိစ္စကို ပြုမိကြခြင်းရယ်​ပါ....
- ချွင်းချက်​အ​နေဖြင့်​ တချို့​သော မျိုးနွယ်​စု​တွေရဲ့ ဓ​လေ့ ထုံးထမ်း​တွေ​ကြောင့်​ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ အိမ်​​ထောင်​ပြုလိုက်​ရတာမျိုး​တွေလည်း ကြုံ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​.. ဒီအခါမှာ အိမ်​​ထောင်​မှုဘဝကို​သေချာ မသိ​သေးခြင်း၊ ရင့်​ကျက်​မှု နည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်​ဝန်​​စောလွယ်​ရခြင်း စတာ​တွေ ကြုံရတဲ့အခါ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​အချင်းချင်း စိတ်​မရှည်​၊ ​ဒေါသထွက်​လွယ်​ခြင်း၊ နားလည်​မှုလွဲခြင်း၊ အိမ်​​ထောင်​​ရေးမသာယာခြင်း​တွေ ကြုံရနိုင်​ပါတယ်​
- ဒီလို ရှု​ထောင့်​​တွေ မျိုးစုံထဲကမှ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ ရည်းစားထားပြီး ​နောက်​ပိုင်းမှာ ​​အ​ပျော်​လွန်​ပြီး မှားတတ်​ကြတာကို.. ကျန်းမာ​ရေး ရှု​ထောင့်​​လေးက​နေ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​...
- ငယ်​ရွယ်​​သေးတဲ့အချိန်​မှာ sex ကိစ္စကို ကြုံကြတဲ့အခါ...
- လိင်​မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်​သတ်​လို့ ကာကွယ်​နည်း​တွေကို ​သေချာ​လေ့လာ မသိရှိခြင်း​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရသွားနိုင်​ခြင်း၊ လိင်​မှ တဆင့်​ ​ရောဂါများ ပိုမိုကူးစက်​နိုင်​ခြင်း​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​
- ငယ်​ရွယ်​​​သေး၍ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ရန်​ မသင့်​​တော်​ဟု ဆိုကာ ကိုယ်​ဝန်​ ဖျက်​ချရာတွင်​ ​သွေးထွက်​လွန်​ခြင်း၊ ​ရောဂါပိုးဝင်​ခြင်း​ကြောင့်​မိခင်​အသက်​ပါ ဆုံးရှုံးရနိုင်​ခြင်း
- က​လေး​မွေးဖွားရာတွင်​ ​လမ​စေ့ပဲ​မွေးခြင်း၊ ​ပေါင်​မပြည့်​ခြင်း
- ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ရာတွင်​ ​သွေးနှင့်​​သံဓာတ်​အားနည်း​သော ​ရောဂါဖြစ်​နိုင်​ခြင်း
- ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျပြီး​နောက်​ပိုင်း စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ပြသနာများ ကြုံ​တွေရခြင်း၊ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်း၊ စိတ်​ဂဏာမငြိမ်​ဖြစ်​ခြင်း
- ဒါပြင်​ အသက်​ငယ်​လွန်းကြီးလွန်းတဲ့သူ​တွေဟာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်​ အရွယ်​​ရောက်​ပြီး အမျိုးသမီးထက်​ အန္တရာယ်​ ပို​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​... ​နောက်​ပိုင်းမှာလဲ မီးယပ်​နဲ့ဆိုင်​​သော ​ရောဂါများကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ်​...
- မိမိဟာ ကိုယ်​ဝန်​လွယ်​​နေရခြင်း(သို့) ပျက်​ကျထားခြင်း​ကြောင့်​ ​ကျောင်းကိစ္စ၊ အလုပ်​ကိစ္စများ နား​နေရခြင်း
- မိမိကိုယ်​တိုင်​က ငယ်​ရွယ်​​သေး​သော မိဘ(teenage parents ) ဖြစ်​ရာ မိမိသားသမီးကို ​ကောင်းမွန်​စွာ ပြုစု​ပျိုး​ထောင်​နိုင်မှု မရှိခြင်းဒီလိုများ မဖြစ်​ရ​လေ​အောင်​ ​လောကကြီး၏ အ​ကြောင်းကို ​သေချာစွာ မသိ​သေးခင် လမ်းမှား မ​ရောက်​​​စေရန်​၊ အသိပညာ​များ တိုးပွား​စေရန်​ လူကြီးမိဘများက သွန်​သင်​ဆုံးမရန်​ လိုအပ်​သကဲ့သို့ လူင်ါများကိုယ်​တိုင်​ကလည်း ထိုက်​​လျောက်​​သော ကျန်းမာ​ရေး၊ လူမှု​ရေး အသိများ ရှိဖို့ လိုအပ်​လှပါတယ်​....
ဆင်​ခြင်​တုံတရားကင်း​သော လူငယ်​လူရွယ်​များ မဖြစ်ကြဖို့ တိုက်​တွန်း​​မေတ္တာပြုလျက်​
How to help your wife in puerperium